Kareemka Jumlada Kareemka Kareemka Suuxinta Lidocaine Cream 500g Soo -saaraha iyo Bixiyaha | FLODERMA
Badeecadaha isku -xiran
Alaabta bilicsanaanta caafimaadka
Kor u qaadida dunta wejiga
Kareemka Kareemka Kareemka Suuxinta Lidocaine Cream 500g
Kareemyada maqaarka kabuubiya ayaa shaqeeya iyagoo xannibaya kanaallada soodiyamka, sidaa darteed neerfayaasha dareenka siiya maqaarka ma diri karaan calaamadaha xanuunka. Kiriimyadaan waxaa laga yaabaa in la isticmaalo inta lagu jiro ballamaha la isku qurxiyo, qalliinka yar ka hor, ka hor inta aan la qaadan tattoo, ama waqtiyo kale oo laga yaabo in maqaarku xanuun soo gaaro.
Xoogga sare ee liido - 10.56%;
Xoogga sare ee liido - 25.6%
Kareemka xanaanaynta ee SM waxaa lagu sameeyay Kuuriya, waxaana ansixiyay KFDA, oo leh 10.56% lidocaine, waa aamin in la isticmaalo, ma dareemi doonto gubasho ama xasaasiyad marka loo barbar dhigo noocyada kale ama badeecadaha Shiinaha soo saaray. 10.56% lidocaine waxay bixisaa saamayn kabuubis aad u xoog badan, waa kabuubinta suuxdinta jirka ee ugu xoog badan oo aan lahayn waxyeellooyin.
Suuxdinta gudaha waxaa ku jira lidocaine, oo ah dawo loo isticmaalo in lagu yareeyo xanuunka meelaha yaryar oo ay ku jiraan maqaarka, sanka, iyo cunaha. Cirbadda lidocaine waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo tachycardia ventricular iyo si loo sameeyo xannibaad dareemeed halka kareemka kabuubinta jirka loo isticmaalo in loo isticmaalo kabuubinta unugyada aag gaar ah. Alaabooyinkaan waxaa loo heli karaa sida jel, buufin, xal, kareem, iyo boomaato. Kareemka Numbing ee SM ayaa inta badan loo isticmaalaa in lagu yareeyo xanuunka ay keento wax -yeelidda, daloolinta, tattoo -ga, ka -qaadista tattoo -ga, cirbadaha yar -yar, cirbadaha xoojiya maqaarka iyo daaweynta laser -ka sidoo kale.
Isku day inaad isticmaasho xaddiga ugu yar ee waxtarka leh iyadoo loo eegayo muddada shaqsiyeed ee waarta
Ugu badnaan lagu dabaqi karo
1. Qaliino kala duwan oo loogu talagalay maqaarka dusha sare (in ka yar 5mm);
2. Cosmetology caafimaad (duritaan la isku qurxiyo, daaweynta laser, iwm);
3. Rabitaanka cirbadaha (microneedle, tattoo, tattooing eyebrow, lipting bleaching, iwm).
Kaydinta: Waa la shaabadeeyey, ma qaboojiyaha.
Sax ahaanshaha: 3 sano
Lix faa'iidooyin waaweyn
Fast Si dhakhso ah u nuug
Joogso waqti dheer
Application Codsi baaxad leh
Sens Dareen la'aan
St Wax kicin
Operation Qaliin fudud
Taxadarka iyo Ilaalinta:
1. Adeegsiga dibedda oo keliya, ee maaha indhaha iyo sanka.
2. Ka fogow kaydinta meelaha leh heerkul sarreeya ama hooseeya heerkulku ka sarreeyo 40 ° C iyo meelaha u dhow iftiinka qorraxda.
3. Furo daboolka kadib isticmaal kasta kuna kaydi heerkulka qolka 1 ~ 30 ° C
Hore: Dharka Dayactirka Maqaarka Hyaluronic Acid Fasalka Caafimaadka
Xiga: Quruxda Qalliinka Caafimaadka Plla Poly-L-Lactic Acid Vials Dermal Filler
Iibso Botox Online
Tallaalka Covid iyo Botox
Joe Biden Botox
Daryeelka Botox ka dib
NABOTA Prabotulinumtoxin A (Nooca Sunta Botulinum ...
Dharka Dayactirka Maqaarka Hyaluronic Acid Caafimaadka G ...
ReNTox ™ - Clostridium Botulinum Sunta Nooca A (1 ...
Quruxda Qalliinka Caafimaadka Plla Poly-L-Lactic Acid ...
HUTOX (Clostridium Botulinum Sunta Nooca A ”)
Alaabooyinka ugu muhiimsan
Mesotherapy Cocktail Face Solution Mesotherapy, Mawduuca Qaadista Wajiga, Daawada Mesotherapy, Wejigga Kor U Qaadista, Cabbitaannada Mesotherapy, Simon Cowell Botox,
Ku dar: Maya.1288 Jidka Jincheng, Xiaoshan, Hangzhou, PRChina.